トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Pachinko emakhazeni izici lesifunda (umehluko inqubomgomo ibhizinisi yi ezisemadolobheni nezisemakhaya)
Njengoba kuyintando sasemakhazeni pachinko futhi inkampani inzuzo, hhayi izitolo kweqiniso unqobile nje amakhasimende. Ngakho-ke, ezinye izimboni kanye, sisuke ezisebenza nenqubomgomo ngamunye esitolo yokuthengisa. Kukhona engaphansi ngengxenye yemali isilinganiso nokunye okunjalo, kodwa izici esifundeni kungabonwa kakhulu kwinqubomgomo ibhizinisi.
Kuthiwani uma umehluko phakathi, ake kuqhathaniswa ne umehluko lebhizinisi ezitolo ezisemadolobheni kanye ezitolo zendawo.
ku amakhasimende ezisemadolobheni nezisemakhaya, inkomba ezahlukene ukukhetha sasemakhazeni pachinko. amakhasimende Urban, kodwa uyofika sasemakhazeni pachinko aim ukunqoba, kokuza esitolo sisuke ngenjongo ukudlala kuka uwine amakhasimende zendawo. Umehluko omkhulu uyovela abanye kusuka lapho. imisebenzi Operating zifaka phakathi, kodwa kukhona lapho umoya ahlukahlukene nokwenza ezifana kwamakhasimende kanye nokugcina, kukhona imvamisa ikakhulukazi ukukhiqiza imvamisa futhi Ball zizinkulu umehluko phakathi esikhundleni Xintai. Ngo
pachinko eshintsha, ukuze andise inzuzo yokusebenza kungashiwo imisebenzi yokusebenza esisemqoka. Urban ezitolo esikhundleni Xintai ngokuvamile kwenziwa. Ngisho e nakomagazini bezobuchwepheshe ezifana manje, vele zifanelane Ukwaziswa Xintai kungabonwa, amakhasimende ezisemadolobheni wena ufuna hit etafuleni yakamuva. Ukuncintisana esitolo emhlabeni
kuyinto seziqalile esigabeni zakamuva efanele usaqala, ukuheha abathengi esitolo intando yakhe yebo ukuwa. Amakhasimende angizi akaphinde asibalele ibhizinisi. Ukuze kungabi bikho Esimweni esinjalo, i wamaduzane yesikhulumi yakamuva ukuncintisana, kusho ukuthi ukuhola ukuheha abathengi.
Nokho, ukwethula imishini emisha kuzothatha izindleko omkhulu. Yiqiniso, izindleko futhi kufanele aluthole udumo olulinganayo walulama inzuzo. Ngenxa yale njongo, emzini esitolo ayikwazi ukucisha ibhola njalo lomcimbi, sasibeka ibhola kuphela kusilela isixazululo izikhathi zezenzakalo sina.
emzini pachinko emakhazeni iwukuba edonsa amakhasimende, ukwethulwa eziningi izenzakalo, kukhona esitolo ukwenza ukukhulekelwa esitolo. Njalo kunzima ukubonisa inkokhelo ethile, zezici zalo muzi of pachinko emakhazeni kwenqubomgomo ibhizinisi mkhulu ukuthi noma ukukhalaza Xintai, abaningi beveza izenzakalo kulindeleke ukuheha abathengi, kuba izinto ezinjalo ukuba isikhalazo. Ngesikhathi esitolo sendawo ephambene, Xintai esikhundleni kuyinto izikhathi ezimbalwa inyanga. Ezingavamile Ukukhuluma esikhundleni futhi
, kodwa kukhona futhi kungenzeka ukwethula yesikhulumi yakamuva, iningi kuyoba ukwethulwa itafula esetshenziswa. ukuma ezisetshenzisiwe uma kuqhathaniswa ukuma zakamuva, mina akalahlekelwanga lincishisiwe. Ngenxa yalesi sizathu, hhayi kuphela umcimbi, sizokwazi ukunikeza wenkokhelo esitebeleni kusukela evamile.
futhi kusukela base ikhasimende, esitolo yesikhalazo ukuthi ukudlala ngesikhathi ongaphakeme ibhola sokuqasha eziningi, ukugxila ngenkathi amakhasimende e ongaphakeme-ukubuya kugcizelele njalo ukuwudlala emisebenzini ezingeyona ingozi. Yiqiniso, esitolo futhi kodwa inzuzo engaphansi lwezinyawo losuku olulodwa ngendlela efanayo, kuyoba operation esitebeleni kanye nenzuzo njengoba kungenziwa kuvikelwe.
oda esitebeleni ukukhiqiza inzuzo, uma kuqhathaniswa ezitolo ezisemadolobheni kwenzeka, ozoba izenzakalo Gase ukuthi ukhaphela amakhasimende kungaba kancane.
e pachinko eshintsha, ngakho kuyoba khona indlela ezihlukahlukene yokuthengisa, kodwa akuzona zonke wamakhaza pachinko kuyiqiniso, ngale ndlela kusukela umehluko izimo indawo kanye namakhasimende izingqimba, emzini pachinko eshintsha futhi lendawo pachinko wamakhaza futhi ukuthi kukhona inqubomgomo eziyisisekelo ibhizinisi lihlukile.
engqondweni ukuthi uke wathi lokhu, kungase futhi nabona ibhizinisi isitayela Pachinkoya, wenkokhelo, izenzakalo, njll, phawula ukuthi leli esitolo wayengeyena yini Ngacabanga kuze kube manje kuyinto izitolo isimanga kakhulu Liyakushintsha. x000D_ esiqinile inzuzo, ngisho uma kwenzeka uma kuqhathaniswa emzini esitolo, ozoba izenzakalo Gase ukuthi ukhaphela amakhasimende kungaba kancane.
engqondweni ukuthi uke wathi lokhu, kungase futhi nabona ibhizinisi isitayela Pachinkoya, wenkokhelo, izenzakalo, njll, phawula ukuthi leli esitolo wayengeyena yini Ngacabanga kuze kube manje kuyinto izitolo isimanga kakhulu Liyakushintsha.